Sardinia တွင်ကြည့်ရှုရန် | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ကျွန်းများ, italia
အီတလီမှာထိပ်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ် Sardiniaတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်မြေထဲပင်လယ်အတွင်းရှိနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ငလျင်လှုပ်ခြင်းမရှိဘဲထူထပ်သောသစ်တောများ၊ လေပြင်းမုန်တိုင်းများနှင့်အလွန်ကြွယ်ဝသောသမိုင်းကြောင်းရှိသောငလျင်လှုပ်ခြင်းမရှိသောတောင်ထူထပ်သောကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းရာသီသည်နိဂုံးချုပ်နေပြီးနေ၏အပူ၊ ကမ်းခြေနှင့်နွေရာသီညများကိုသာစဉ်းစားသောကြောင့်စကားပြောကြရအောင် Sardinia မှာကြည့်ဖို့ဘာ
2 Sardinia ခရီးသွားလုပ်ငန်း
Es အီတလီနိုင်ငံရှိအကြီးဆုံးကျွန်းများတစ်ခုတောင်ဘက်တွင်ပြင်သစ်အလံအောက်၌ Corsica ရှိပြီး၊ ရောမမြို့မှသင်သုံးနာရီအတွင်းတိုက်ရိုက်သင်္ဘောဖြင့်သွားနိုင်သည်။ နစ်စီမှ (၇) နာရီကြာသည့်ခရီးသည်အနည်းငယ်သာကြာသော်လည်းသင်သာဒီနီဒင်နားသို့အမြဲတမ်းရောက်နိုင်သည် လေယာဉ်ဖြင့်။
Sardinia တွင်ကီလိုမီတာ ၂၀၀၀ နီးပါးရှိသောကမ်းရိုးတန်းရှိပြီးသန့်ရှင်းသောပင်လယ်နှင့်ရှိသည် ကမ္ဘာကျော်ကမ်းခြေ။ Berchida ကမ်းခြေသို့မဟုတ် Oristano နှင့် Ogliastra၊ Costa Smeralda သို့မဟုတ် Alghero ပြည်နယ်များရှိကမ်းခြေများကိုသာဖော်ပြရမည်။
sardinia ၌တည်၏ လေဆိပ်သုံးခုရှိတယ်တောင်ဘက်တွင် Caglieri၊ Olbia-Costa Smeralda လေဆိပ်နှင့် Alghero လေဆိပ်။ အင်္ဂလန်၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ဆွစ်ဇာလန်မှတိုက်ရိုက်ပျံသန်းမှုများရှိသည်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲကူးတို့လည်းရှိတယ်။
Sardinia ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အားလပ်ရက်များတွင် element အချို့ကိုထည့်နိုင်သည်။ ရှေးခေတ်သမိုင်း, လက်ရာမြောက်သောကမ်းခြေ, တောင်တန်းရှုခင်းများ တောင်တက်သွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ... ငါတို့အရာအားလုံးကိုအနည်းငယ်ချစ်ကြမယ်။
ကျွန်း ခြောက်လအဓိကဒေသများသို့ခွဲခြားထားတယ်ဗဟို၊ အရှေ့၊ အရှေ့မြောက်၊ အနောက်မြောက်၊ အနောက်နှင့်တောင်။ The အလယ်ပိုင်း sardinia သင်၏နှလုံးသားသည် တောင်များ၊ သစ်တောများ၊ မြစ်များနှင့်ရေတံခွန်များ။ ၎င်းသည်အရသာရှိသောဒိန်ခဲများကို ပြုလုပ်၍ သစ်အယ်သီးများနှင့်အခွံမာသီးများကိုစိုက်ပျိုးသောပိုမိုစိုက်ပျိုးရေးisရိယာဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်သောအစားအစာနှင့်သန့်ရှင်းသောလေများကြောင့်ဤတွင်နေထိုင်သူများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ကြသည်ဟုဆိုကြသည်။
၎င်းသည်သင်သိနိုင်သောနေရာတွင်ရှိသည် ကျွန်းယဉ်ကျေးမှု နှင့်ရာသီတစ်ခုချင်းစီနှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကျက်သရေရှိပါတယ် သမိုင်းဝင် villasအဆိုပါ ပွဲတော် အဆိုပါရင်ပြင်, Tiscali ကျေးရွာများသို့မဟုတ်စိတ်ကူး Gorropu Canyon အ။
အရှေ့ဘက်တွင်ကမ်းခြေများ၊ ကန်များနှင့်တောင်တန်းများရှိသောပြည်ဖြစ်သည်။ ဤရှုခင်းများသည်တစ်ခြားစီဖြစ်သောကြောင့်စိမ်းပင်လယ် မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့ခုန်ချနိုင်သည် မူးဝြေခင်းကမ်းပါး နှင့်မရနိုင်ပါ, သပိတ်ပင်သစ်တောများ ရွှေလင်းတများသည်ကောင်းကင်၌ရှိသည်။ Sardinia ၏အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ရှိသည် Cala Liberotto လှပသောလှိုင်းတံပိုး Cala Ginepro ကွဲပြားခြားနားသောအရိပ်၏ကွဲပြားခြားနားသော၎င်း၏ရေနှင့်အတူ Cala Ziu Martine, အ Cala Fuili, အ Cala Cartoe သို့မဟုတ် Cala Luna ကြောင်းလကနေယူပုံရသည်။
အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် Gorropu Canyon အ, မီတာ ၃၀၀ နက်ရှိုင်းသော Golgo တွင်းနက်၊ Baunei တောင်တန်းဒေသသည်မြေထဲပင်လယ်သို့၎င်း၊ တောင်ပေါ်လမ်းကြောင်း တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်စိတ်ဝင်စားသူများစွာသည် Selvaggio Blu ဖြစ်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံးနေရာများမှာ Arbatax အပန်းဖြေစခန်း ၎င်း၏အနီချောက်နှင့်အတူသေးငယ်တဲ့ Moresca နှင့် Porto Frailis ၏ coves ၁၇ ရာစုတာဝါသို့မဟုတ် Cea ကမ်းခြေရှိ Santa Maria Navarrese၊ ဘာရီ၏ coves များ။
ပိုပြီး အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် Costa Smeralda ဖြစ်သည်။ တစ်ခုသာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကမ်းခြေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသာယာလှပတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်။ လှပတဲ့ Porto Cervo၊ Santa Teresa Gallura ရဲ့ Marina၊ La Maddalena ကျွန်းစု၊ Cala Corsara, ပန်းရောင်ကမ်းခြေရှိပန်းရောင်ကမ်းခြေ၊ Cape Testa၊ Bay La Colba နှင့် Rena Majore နှင့် Rena Bianca တို့၏သဲသောင်ပြင်များ၊ Palau ၏ဝက်ဝံပုံကျောက်ဆောင်၊ Roccia della Tartaruga သို့မဟုတ် Giuseppe Garibaldi ၏အိမ်။
အနောက်မြောက်ဘက်တွင်ကျောက်ဆောင်များနှင့်သမိုင်းကြောင်းအရိပ်လက္ခဏာများပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကျနော်တို့ကနေစတင်နိုင်ပါသည် Castelsardo အလယ်ခေတ်ခံတပ် ဥပမာအားဖြင့်ပင်လယ်ကိုကြည့်ရင်းသဘာဝသို့နှစ်မြှုပ်ခြင်းနှင့်ကျောက်တုံးများသည်သဘာဝရေကန်တစ်မျိုးဖွဲ့စည်းထားသည့်ပွန်တာလာကက်ပရာတွင်ရေကူးအနည်းငယ်စီးသည်။
အနောက်မြောက်ဘက်ကမ်းခြေများသည်လှပသည် သူတို့ကျွန်းပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအကြားရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့သည်သဲသောင်ပြင်အဖြူများကဲ့သို့ဖြစ်သည် La pelosa ကမ်းခြေ, Porto Palmas, Bombarde ကမ်းခြေသို့မဟုတ် Porto Ferro ကမ်းခြေ။ အကြံပြုထားသည့်နေရာများအနက်စတီတီနို၊ ကိပ်ဖောင်းကုန်း၊ ကုန်းတွင်းဆဆာရီနှင့် Fontana di Osello (သို့) Piazza d'Italia တို့ကိုသင်္ကေတအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ baratz ရေကန် နှင့် နော်ဝေ Monte d'Accoddi ၏။
၎င်းသည်လည်းပြည်တော်ဖြစ်သည် Coral ကမ်းခြေ, Sardinia အတွက်ပုလဲပုခက်, ဒါမှမဟုတ် Neptune's Grotto Cabo က de Caccia ၏အရေးပေါ်အပေါ်။ တကယ့်ကိုလှပတဲ့ဆိုက်ပါတကား! ၎င်းသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဖွင့်ပေးသည့် stalagmites နှင့် stalactites ရှိသောမြေအောက်ဆားငန်အိုင်ဖြစ်သည်။ မင်းလမ်းလျှောက်ရတာကိုကြိုက်လား မမေ့နိုင်သောခရီးစဉ်တစ်ခုတွင် Alghero နှင့် Bosa ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အနောက်ဆာဒီနီယာသည်လူကြိုက်များသည် ဒါပေမယ့်သူကနေဆဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နှင့်ဝေးဝေးဆူညံသံကနေရှိပါတယ်။ Oristano ၎င်းသည်ဖိုနီးရှားလူမျိုးတို့၏မြစ်ဖြစ်သည်။ သင်ပွဲတော်သို့သွားလျှင် Sa Sartiglia မြင်းစီးပြိုင်ပွဲကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးကမ်းခြေများ၌ရှိကြ၏ Penisola del Sinis။ Mal di Ventre ၏ကျွန်းငယ်လေးလည်းရှိပြီး၊ Penisola del Sinis နှင့် Scoglio del Catalano တို့သည် Mal di Ventre ၏ Marina inaရိယာကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။
ဆိတ်များ သဘာဝကိုကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောအခြား ဦး တည်ရာတစ်ခုဖြစ်သည့် Prama Mount or the Tharros အပျက်အယွင်း။ ကုန်းတွင်းပိုင်းသည်သမိုင်းဝင် Santu Lussurgiu ရွာဖြစ်ပြီးထင်ရှားကျော်ကြားသည် Fordongianus ၏ရောမရေချိုးကန် အေဒီပထမရာစုမှချိန်းတွေ့ ကော်စတာ Verde စုံတွဲတစ်တွဲကိုဖော်ပြရန် Piscinas ကမ်းခြေသို့မဟုတ် Playa Masua ကမ်းခြေနှင့်ရွှေဖြူသွယ်သွယ်သွယ်သွယ်သွယ်သွယ်သွယ်သွယ်ပို့ထားသောတောင်ဘက်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။
နောက်ဆုံးတော့ Sardinia ၏တောင်ဘက်သည်နွေရာသီတွင်ခရီးသွား: ည့်သည်များဖြစ်သောကမ်းခြေနှင့်ကမ်းခြေများကိုအာရုံစိုက်သည် ကြောင်းကဲ့သို့သောကာရစ်ဘီယံကနေယူပုံရသည်။ ဤနေရာတွင်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အကျော်ကြားဆုံးကမ်းခြေများသည် Porto Corallo ရှိ Sant'Antioco နှင့် San Pietro နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ပိုမိုအပူပိုင်းဆိုင်ရာအခြားနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ San Pietro ကျွန်းတွင်အရေးအကြီးဆုံးမြို့မှာလှပပြီးဖျော်ဖြေမှုပေးသော Carloforte ဖြစ်သည်။
တောင်ဘက်တွင် Cala Grotta၊ Caletta, Iglesias နှင့်၎င်း၏အလယ်ခေတ်ပွဲတော်များ၊ Porto Pino နှင့်၎င်း၏ထင်းရှူးပင်များ၊ သပိတ်ပင်များနှင့်ကြည်လင်သောကြည်လင်သောရေများရှိသည်။ Cala Cipolla, Cabo Spartivento, Baia Chia နှင့်မမေ့နိုင်သော Cape Teulada မှ Pula သို့သွားသောကမ်းခြေများ.
တောင်ဘက်ကဘယ်မှာလဲ ကျွန်း၏မြို့တော်၊၎င်း၏သမိုင်းဝင်ခရိုင်များနှင့်အတူ၎င်း၏အရသာ gastronomy, စျေးဆိုင်များနှင့်အနုပညာပြခန်း။ Caglairi တွင် Poetto ကမ်းခြေနှင့် Via Roma သို့မဟုတ် Saint Rémy၏ခံတပ်များရှိပြီးနေ ၀ င်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းသည်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်။
သငျသညျကိုတှေ့လိမျ့မညျအဖြစ်, Sardinia တစ် ဦး ကျက်သရေပါပဲ။ အကယ်၍ သင့်တွင်အချိန်များများမရှိပါကအကောင်းဆုံးအရာမှာ Caglairi သို့ရောက်ရန်နှင့်ကျန်ရှိနေသေးသောသင့်ကျန်ရှိနေသေးသောရက်များကိုကမ်းခြေအနည်းငယ်နှင့်အတူစီစဉ်ထားရန်ဖြစ်သည်။ တောင်တက်, ရှေးဟောင်းသမိုင်းနှင့်ဂီတ၏ညနှင့်အရသာရှိတဲ့ဒေသခံအစားအစာ။ သင်ကျွန်းတစ်ခုလုံးကိုသွားနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်သင့်အားပြန်လာရန်အကြောင်းပြချက်ပေးသောကြောင့်ပိုကောင်းနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » italia » Sardinia မှာကြည့်ဖို့ဘာ